Ra'yiga Product - Dongguan Yuechuang is Co., Ltd
Yue Chuang Product Fikradaha
Intelligent, hufan oo xasiloon - ha soo saarka isku xira gaariga ka maskax ah oo hufan, ka dhigi gaariga ammaan iyo ka badan la isku halayn karo! Suuqa baabuurta waa warshadaha ee dunida ugu weyn oo ugu muhiimsan, waxay muujinaysaa isbeddello ah ee koritaanka degdeg ah, kacaanka farsamada iyo dib u dhiska warshadaha hoos asalka ah ee horumarinta degdegga ah ee suuqa baabuurta caalamka dhaqaaqi doono dhinaca interoperability, dhaqdhaqaaqa, isku driving, waayo-aragnimo user iyo falanqaynta xogta weyn.
Sida biriijka isku xidha circuit baabuurta, isku xira ee baabuurta kaalin ku qodid oo wareeg ah oo wareegaya hadda ee gaari ee, samaynta technology injineernimada elektarooniga ballaaran codsatay in suuqa baabuurta, gaar ahaan elektarooniga baabuurta.
Iyadoo horumarinta technology cusub iyo gaadiidka tamar cusub, baabuurka ku xiran oo driving si toos ah, lacagta la isugu gudbiyo xogta iyo hal-abuurka ah gaari nidaamka firfircoon iyo koritaanka ah jibbaaranaha, shuruudaha isku halaynta isku xira baabuurta ee hirka sare, danab sare iyo deegaanka hadda waa ka badan iyo in ka badan sare, miniaturization, ammaanka, isku halaynta, ilaalinta deegaanka waa horumarinta dhinaca mustaqbalka ee isku xira baabuurta.
Si loo gaaro oo baaxad weyn oo wax soo saarka mass, soo saaraha soo saarka isku xira u baahan tahay si kor loogu qaado simayo ee la xiriira ee geedi socodka of this Isbadal warshadaha.
Yue Chuang waa isku xira baabuurta automatic-qeybiyeyaasha xirfadeed mashiinka shirka, iyadoo 10 sano oo waayo-aragnimo qani ah ee R & D iyo warshadaha wax soo saarka, ee ah fikrad wax soo saarka caaqil, hufan oo deggan, si adag loo xakameeyo tayada wax soo saarka, si ay u bixiyaan isku xira baabuurta shakhsiga qalabaynta mashiinka shirka xal habka si loo daboolo baahiyaha dhabta ah ee isku xira baabuur-soo-saarka, isku xira si ay u caawiyaan farsameeya in ay sameeyaan qalabaynta isku xira hagaajinta line-soo-saarka, shaqada ay gacanta ku culus, habka wax soo saarka fududeeyey, tayada alaabooyinka deggan, kor u qaadista heerka wax soo saarka si loo hagaajiyo isku xira ee isku xira baabuurta, wax soo saarka hufnaan iyo tartan ee ganacsiga ..
Aragtidayadu waa: in uu noqdo heerka koowaad isku xira baabuur brand mashiinka shirka dunida, si ay u sameeyaan wax soo saarka isku xira baabuurta ka maskax ah oo hufan, si ay u sameeyaan gaariga ammaan iyo ka badan la isku halayn karo! Tani waa shaqada oo ah isha ugu of our awood.
Bixiyaan xal heer sare for isku xira ee automaton oo dhan loogu talagalay macaamiisha, soo dhaweyn si ay u booqdaan warshad, wuxuuna ka xaajoodaa ganacsiga, waxaan diyaar u yihiin shirkadaha wax soo saarka ee Xidhiidhiyayaasha baabuurta u xalliyaan masalooyin adag, soo dhaweyn tashi bilaash ah oo codsiyada casriyeyn iyo xal isku xira qalabaynta saarka shakhsiga.